नेपाल बन्द कहिलेसम्म ? हामी चुप जहिलेसम्म… - Enepalese.com
नेपाल बन्द कहिलेसम्म ? हामी चुप जहिलेसम्म…
इनेप्लिज २०७२ साउन ३१ गते ११:०२ मा प्रकाशित
“बन्द भनेर के गर्नु रु बा बिरामी हुनुहुन्छ, हिँड्नै पर्‍यो ।” सामाखुसीबाट हिँडेर वीर अस्पताल आइपुगेका सुधा मैनालीको गुनासो हो यो । उहाँका पिता डम्बर मैनाली गत सातादेखि आन्द्राको समस्याका कारण अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो । एक हातमा झोला र अर्को हातमा छाता बोकेर सुधाले करिब एक घन्टा पैदल यात्रा गर्नुपरेको थियो । घर फर्कंदा पनि गाडी पाउने निश्चित छैन । गर्मीयाममा लामो बाटो हिँडेर पुग्नुपर्दा सुधामात्र होइन धेरै सर्वसाधारणले आज यस्तै सास्ती भोग्नुपरेका दृश्य देखिए ।